Qubanaha » Musharax Xasan shiikh oo soo bandhigay dhola tus aad uweyn.+Sawirro
Musharax Xasan shiikh oo soo bandhigay dhola tus aad uweyn.+Sawirro
iyadoo meeshii ugu adkeyd uu marayo ololaha doorashada madaxweynaha ayaa musharaxa Xasan Shiikh maxamuud oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad waxa uu maanta xaflad ballaaran oo ku muujinayo cududiisa waxaa uu ku qabtay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho.
Xafladam oo weli socota ayaa waxa la sheegayaa iney ka qeyb galayaan xildhibaano ku dhow 200 oo taageero u muujinaya musharaxa Xasan Shiikh, kuwaasoo sheegaya iney codkooda isaga siin doonaan.
Musharaxa Xasan Shiikh oo difaacanaya xilka madaxweynaha Somalia ayaa goor dhow gaaray goobta ay xafladaas ka socoto.
Dhoolatuskan uu Xasan Shiikh ka sameynayo galabta magaalada Muqdisho oo ah kii ugu weynaa ee illaa hadda la arko ayaa ku soo aadaya xili wax ka yar 24 saac ay ka harsan tahay doorashada Madaxweynaha Somalia oo beri ka dhaceysa Muqdisho.
Musharaxiinta u taagan doorashada ayaa ku guda jira saacadihii ugu dambeeyey ee ololaha doorashada, waxaana musharax walba uu dedaalkii ugu xooganaa ugu jiraa inuu taageerayaasha ugu badan ka helo xildhibaanada cod bixinta ka qeyb qaadanaya.